त्यो धमिलो दिन! - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
त्यो धमिलो दिन! | Saturdayकलम | Kavyalaya
त्यो धमिलो दिन!
by ध्रुवराज श्रेष्ठ July 13, 2019
गड्याङगुडुङ्को आवाजसँगै बलिरहेको सुर्यरुपि बत्ति झ्याप्प निभ्यो र एक्कासि टिनका छानाहरुको बेसुरे संगीतको पर्वाह हुन थाल्यो । यो प्रकृतिसँग कसको पो के लाग्छ र ? मन परे पनि मन नपरे पनि यसले दिएको र प्रस्तुत गरेको हरेक कुरा हामी प्राणी जातिले सहनै वा भोग्नै पर्छ ।
बाहिर ठुलो गड्गडाहट्मा पानी परिरहेको थियो त्यहि पानीले मेरो स्मृतिमा ओइलाईरहेको नमिठो यादलाई जिवीत पार्ने चेष्टा गर्दै थियो ।
शक्तिमानझैँ शक्तिशाली ती यादहरु मानसपटलको एक कुनाबाट फुत्त, निकै जोरबलका साथ स्वतन्त्रता खोज्दै बाहिरियो।
खाली दिमाग सैतानको घर अनि खाली समय स्मृतिको भर । कि त भबिष्यको चिन्ता हुन्छ कि त बितिगएको कुराहरुको ….
कहिल्यै नछुट्टिने अनि सुख दुःखमा साथ दिने वचन थियो अनि त्यो वचन भन्दा पनि मजबुत हाम्रो साथ ! वर्तमान सबैको बोझपूर्ण र बिगत सबैको ओजपूर्ण हुन्छ कि, वर्तमान र विगतसँग यो मनको दुश्मनी यो मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन । मैले यति मात्र बुझेको छु मानिसले चाहेर र सोचेर मात्र जीवनको लक्ष्य र भबिष्य निर्धारण गर्न नसकिने रै’छ । यहाँ त समय पनि त छ । कसैले त्यसै समय बलवान् छ भनेर भनेको पनि त होइन रहेछ !
त्यो बेला समयको घडी ठिक उल्टो घुम्दै थियो हाम्रो परीवारको लागि । २०५५ सालतिर तराईमा हाम्रो परिवारको राम्रै जीवन चलिरहेको थियो । १०/१२ कठ्ठा जमीन, पिल्लर उठाएको एकतले पक्का-घर अनि शिक्षित परिवार । तर सुख र दुःख पाहुना भएर आए जसरी पाहुनै भएर जादा रहेछन् । बर्खा यामको ठुलो बाढीले न त घर नै सुरक्षित बनायो न त बारी नै । सारा पहाडबासीहरु तराई झर्ने क्रममा, त्यो बिपत्तिले हाम्रो परिवारलाई भने पुर्खौलि गाउँमा बसाईँ सर्न बाध्य बनाईदियो । त्यतिबेला म त्यहि ५/६ बर्षको हुदो हुँ । यो मन चाहिँ बाढीले बगाएको घरबारको पिरभन्दा पहाड घर जान पाउने खुसीले उन्माद थियो ।
हो, त्यहि पहाड घरले दिलाइदियो मलाई संसार कै सबैभन्दा मिल्ने साथी- संवाद । हाम्रो पहाड घरको ठिक दुई घर तल उसको सानो घर थियो । अनि म पढ्ने र ऊ पढ्ने स्कुल कक्षा पनि एकै । कहाँ म तराईबाट आएको हेर्दै हावाले उडाउला जस्तो केटो अनि कहाँ ऊ पहाडमा जन्मि/हुर्किएको खाइलाग्दो बाघसँगै जुध्ला जस्तो केटो । ऊ सबै काम कुरा गर्थ्यो, जो मेरा लागि असम्भव जस्तो थियो । चिलाउने, कटुस, बेलौतिको रुखमा चढेर फलफुल खानेकुरा टिप्नेदेखि लिएर ठुल्ठुला रुखमा चढेर घाँस झार्ने सम्मको काम ऊ सजिलै सँग गर्न सक्थ्यो । उसैको संगतले र सिकाइले ती सब काम मेरा लागि सजिलो भयो । म पनि रुख चढ्न सक्ने भएँ । थाहा छैन उसको र मेरो मित्रता त्यति गाढा कसरी भयो भन्ने । ऊ स्कुल जानेबेलामा मेरो घरमा आउथ्यो, र हामी सँगै स्कुल जान्थ्यौँ । अनि स्कुल छुट्टी भइसकेपछि हामीसँगै फर्कन्थ्यौँ । ऊ मलाई कहिले कहाँ त कहिले कहाँ घुमाउन लगिरहन्थ्यो । गाँउको भीरपाखा/ खोल्सा अनि सबैभन्दा रमाइलो ठाउँ खोला !
हामी फुर्सद भयो कि, दौडेर गाउँको फेदमा रहेको खोलामा गएर रमाइलो गर्थ्यौं । उसैले त हो मलाई समुन्द्र जस्तो खोलामा माछा जसरी पौडिन सिकाएको, अनि माछा मार्न पनि । साच्चि, कत्ति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो खोलामा खेल्न ! लाग्थ्यो संवादसँग बस्दा र खेल्दा समय त मानौ घोडाको गतिमा दौड्न्थ्यो । अनि ऊ बिनाको समय कछुवा गतिमा । हामी जहाँ जादा पनि सँगै हुन्थ्यौ । मात्र खान र सुत्नेबेलामा हामी छुटिन्थ्यौ । त्यहि कारण घरमा गाली पनि धेरै खाइन्थ्यो ।
स्कुलबाट फर्किसकेपछि संवाद आफ्नो घरको काम सकेर पनि मलाई सहयोग गर्न आउथ्यो । वाह, कत्ति फास्ट थियो मेरो साथी संवाद काम गर्नमा । तर जतिसुकै काममा तगडा भए पनि पढाईमा भने ऊ साह्रै कमजोर थियो । उसको रोल नम्बर सधैँ पछाडिबाट अगाडि रहन्थ्यो । र म भने कक्षामा सधैँ प्रथम नै हुन्थे । मेरो त्यत्रो संगतले पनि उसको पढाइमा कुनै सुधार आएको थिएन । र मेरो सिकाइले पनि कुनै जादु देखाउन सकेको थिएन ।
हो त्यहि मेरो राम्रो पढाइ र उसको त्यहि कमजोर पढाइ नै बन्यो हाम्रो मित्रतामा सगरमाथा भन्दा ठुलो बाधक । गाउँको स्कुल न हो त्यहाँ मात्र प्राथमिक तह सम्मको पढाइ हुने, त्यसपछिको पढाइ पुरा गर्न सहर जानुपर्ने । मेरो पढाइ राम्रो भएकैले मैले लगातार परिक्षा उतिर्ण गर्नसके । त्यो पढाइको रसले यो बुझाइदिएन कि म कक्षा उतिर्ण हुनु भनेको आफ्नो मनको साथीसँग अलग्गिनु हो । पढाइमा कमजोर भएकै कारण संवाद कक्षा चारमा पास हुन सकेन । रिजल्टको जानकारी पनि उसले नै मलाई दिएको थियो । कत्ति खुसीका साथ सुनाएको थियो उसले म पास भएको कुरा ।
कक्षा फेरिए पनि मेरो र संवादको स्कुल त एउटै थियो अनि हाम्रो त्यस्तै दिनचर्या । दिनचर्या झन् रमाइलो हुदै थियो किनकि हामी दुबैजना छुट्टाछुट्टै कक्षा भएकाले उसको कक्षामा के के भयो सब कुरा ऊ मलाई सुनाउथ्यो । अनि मेरो कक्षामा के के भयो म उसलाई । यसरी कुराहरु भन्दा कहिले खुसी हुन्थ्यौँ त कहिले हाम्रो कक्षा एउटै भएन भनेर निराश हुन्थ्यौँ । स्कुल छुट्टि पछिको समय पनि पहिले जसरी नै बित्दै गयो । उसैले नै सिकायो मलाई बाँसको खोस्टाको फिरफिरे बनाएर रमाउन र चिलाउनेको बोक्राको सिट्टि बनाएर बजाउन !
जहाँ जान्थ्यौँ, ऊ र म सँगै जान्थ्यौँ । जे गर्थ्यौँ, सँगै गर्थ्यौँ । तर जब कक्षा ५ को परिक्षाफल प्रकाशित भयो तब फेरी त्यहि ५ बर्ष पहिलेको भन्दा पनि ठुलो बाढी हाम्रो मित्रतामा आयो । १० बर्षको हुदा मैले कक्षा ५ उतिर्ण गरे तर ऊ भने फेरी ४ कक्षामा फेल ।
मेलै कत्ति भन्दा पनि बुबाले मान्नुभएन । मेरो अबको बाँकी पढाइ तराईको आफन्तकोमा बसेर पुरा गर्ने घर सल्लाह भयो । संवाद यसपालि धेरै नै निराश थियो । म जति निराश भएर यो कुरा उसलाई भनिरहेको थिए त्यो भन्दा धेरै गुणा निराश मेरो प्रिय साथी संवाद भएको थियो ।
बर्षको सुरुवात वैशाख महिना कत्ति खुसी अनि रमाइलो हुन्थ्यो पहिला । बोटबिरुवामा पुराना पातपतिङ्गर झरेर नयाँ पालुवा पलाउने समय ! हरियाली हुने समय ! तर त्यहि समय हाम्रो झ्याङ्गिएर हरइयो भएको मित्रतालाई उजाड्न-टुटाउन खोज्दै थियो । र त्यो दुस्प्रयासको अगाडि मेरो नाबालक हट र रुवाइ निश्प्रभाव रह्यो ।
गाडी चढ्नेबेला म र संवाद धेरैबेर भावुक भयौँ । एक्कासि, उसले खिस्स हाँस्दै एउटा चिठ्ठी थमाइदियो । र ऊ सरासर एकचोटि पनि पछाडि नफर्कि दौडिदै तल धेरै तल त्यहि खोलाको बाटो गयो र गईरह्यो !
सम्झनाको धमिलो पान्नामा उसको त्यहि पछाडिपट्टिको भाग मात्र सम्झना आउँछ अहिले । म पढाइको लागि सहर आएको ४ महिनापछि भदौरे भेल/पहिरोमा मेरो गाउँ नै सबै पुरियो रे भन्ने खबर आफन्तजनले सुनाए मलाई । मेरो परिवारका साथै मेरो आत्मीय साथी पनि त त्यही पापी पहिरोमा कतै पुरियो रे ।
बाघसँग लड्ने ताकत राख्ने साथीले पहिरोसँग लड्न सकेनछ ।
परिवार शोकले भन्दा पनि मलाई मित्र शोकले धेरै दिन धेरै बर्ष सताईरह्यो, सताईरा’छ र अझै कति सताइरहला?..
Background Image Source: Venice Abstract Painting by Tanya Boston from artmajeur
चियागफ विथ नयनराज!